असोज १०, २०७५ | सिन्धली
– विमर्श मोक्तान ‘प्रख्यात’
वडाअध्यक्ष, मरिण गाउँपालिका वडा नं. ३, सिन्धुली
तपाईको वडाको कार्ययोजनालाई कसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ ?
गाउँपालिकाले कृषिलाई विशेष जोड दिएका कारण यो वडा यस योजना कार्यान्वयनको तयारी छ । यसको लागि हामीले कृषकहरुलाई तालिम दिनको लागि आवश्यक प्राविधिकहरुको व्यवस्थापन गरेका छौं । साथमा सिंचाई र डिपबोडिङको योजनालाई अगाडि सारेका छौं । काम गर्न सजिलो होस भनेर गाउँपालिकाले पनि कृषिको लागि एकमुष्ठ रकम वडालाई छुट्याइदिएको छ । त्यही रकमबाट स–साना सिंचाई निर्माण गर्ने र कृषकहरुलाई अनुदान दिने निर्णय गरेका छौं । बजेट आइसकेपछि छिट्टै कार्यान्वयन हुनेछ ।
परम्परागत कृषिलाई आधुनिकीकरण बनाई रोजगार बढाउनका लागि विभिन्न संघ संस्थासँग पनि सहकार्य गर्दैछौं । तरकारी उत्पादन गर्न आवश्यक बिउबिजनको जानकारी र अन्य जानकारीको लागि तालिम दिदैं छौं । चेतना नै पहिलो मुख्य कुरा हो । यसपछि मात्र व्यवहारमा लागू हुन्छ । यसैले तरकारीको लागि टनेलहरु बनाउने शीप सिकाएका छौं ।तालिममा सिकाएअनुसार कृषकहरुले तरकारी खेती र व्यवसायिक पशुपालन सुरु गर्दैछन् । हामीले प्रोत्साहित पार्न व्यक्तिगत र सामुहिक दुबैलाई अनुदान दिने निर्णय गरेका छौं ।
उत्पादन सुरु भइनसकेका कारण व्यवस्थाथनको लागि निर्णय भइसकेको छैन । गाउँपालिकामा छलफल चलिरहेको छ । सायद चिस्यान केन्द्र र संकलन केन्द्र निर्माण गर्न छिट्टै योजना बन्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ । उत्पादन गर्ने एउटा आधार बनेर उत्पादनको चरणमा पुगि सकेपछि संकलन र चिस्यान केन्द्र पनि बनिनेछ । साथै, कृषिमा उत्पादन बढाउनको लागि यस वडाको सुकेदोभानदेखि नक्कलीफाँट हुँदै भालुमारासम्म पुने सिंचाइको लागि प्रदशेबाट १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भइसकेकोछ । परिपत्र आएपछि यसको कार्यान्वयन हुनेछ । ठाउँठाउँमा डिप बोडिङ पनि गाड्ने निर्णय गरेका छौं । यो पनि कार्यान्वयनको चरणमा छ ।
तपाईंको वडा यस गाउँपालिकाकै मूख्य पशुपालन क्षेत्रमा पर्छ । गाउँपालिकाले चाहिँ चरिचरिन बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । यसले पशुपालकलाई कस्तो असर पार्ला ?
चरिचरण बन्दले अरु समस्या त आउदैन तर चैत बैशाखमा घाँसको समस्या हुन सक्छ । त्यसको लागि हामीले उन्नतजातको घाँसको बिउहरु ल्याएर एैलानि जग्गा जमिन र कृषकका आसपासका खाली जमिनहरुमा लगाउन लगाउने निर्णय गरेका छौं । यसबाट प्रशस्त मात्रामा घाँसको उत्पादन हुनेछ । पशुपालकहरुलाई पनि अनावश्यक वनमा गएर दिनभरीको समय खेर फाल्नु पर्ने छैन । हामीले यसको लागि सरोकारवालाहरुलाई बोलाएर बिउजिन वितरण गर्ने र त्यसको उत्पादनविधि सिकाउने निर्णय गरेका छौं । यसकारण चरिचरिन बन्दले पशुपालकलाई असर पार्दैन ।
तपाईंको वडा मरिण खोला र चुरेका खहरेहरुले घेरिएको छ । यस समस्यालाई समाधान गर्न वडा, गाउँपालिका र राष्ट्रियस्तरको कुनै योजना बनेको छ ?
पहिलो कुरा त हामीले यस क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न नै भनेर चरिचरन बन्द गर्ने निर्णय गरेका छौं । तारजाली लगाएर समाधान गर्न खोज्दा त्यो सफल भएन । किनकि तारजालीलाई खोलाले बगाउने, पुर्ने र जाली पुरानो भएपछि च्यातेर जाने समस्या निम्तियो । अब यसको विकल्प भनेको प्राकृतिक हिसाबले नै समाधान खोज्नु हो । यसको लागि चरिचरन बन्द गरेर बोट बिरुवा र रुखहरु रोपेर हुर्काएर खोलालाई साँघुर्याउनुको विकल्प छैन । यसो गर्दा जटिबुटिहरु पनि हुनेछ र चुरक्षेत्रको संरक्षण पनि हुनेछ ।साथै प्रदशे, संघसँग समन्वयन गर्दै राष्ट्रपटि चुरे संरक्षणलाई विशेष जोड दिन छलफल पनि हुँदैछ । गाउँपालिका स्तरबाट त अघिल्लो वर्ष मात्र हामीले नौ सय थान जाली यो वडामा मात्र लगाइएको थियो तर यसले खासै परिणाम दिन सकेन ।
चुरे संरक्षण समितिसँग कस्तो समन्वयन भइरहेको छ ?
यो समितिले अब चुरेक्षेत्रमा रहेको खहरेहरुको शीरदेखि नै संरक्षण गर्दै लैजानु पर्दछ । खहरेको बीच र पुच्छारमा मात्र तारजाली लगाएर थुन्दा त्यसले कुनै उपलब्धी हासिल गर्न सक्दैन । यो कुरा अगाडिको कामहरुको नतिजाबाट पनि प्रमाणित भइसकेको छ । हामीले शीरदेखि संरक्षण गर्न प्रस्ताब राखेका छौं । तर समतिको कार्यायोजना हेर्न भने बाँकी नै छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रगति कस्तो भइरहेको छ ?
स्वास्थ्यको कुरा गर्दा गाउँपालिकाको सबैभन्दा सुविधा यस वडामा छ जस्तो मलाई लाग्छ । कल्पवृक्ष गाविस हुँदा नै यहाँ एउटा स्वस्थ्य भवन थियो । अहिले यहाँ बर्थ सेन्टर संचालनमा आएको छ । मासिक १०–१५ जना सुत्केरीहरुले सेवा लिइरहेका छन् । सबै आमाहरुले हिजोको पीडाबाट मुक्ति पाएकोछ । गाउँसभाको पहिलो सभामा मैले विशेष जोड गरेर एम्बुलेन्सको माग गरेको थिएँ । कोही बिरामी भयो भने ट्याक्टरमा, बाइकमा लैजानु पर्ने स्थिति थियो । दिदीबहिनीहरु स्वास्थ्यचौकीसम्म पुग्न नपाई बाटोमै डेलभरी हुनुपर्ने समस्या थियो । हाम्रो मागलाई गाउँपालिकाले सम्बोधन गरेर अहिले एम्बुलेन्सको व्यवस्था भएको छ । सबै विरामीलाई यसले सहजता बनाई दिएको छ ।
यसैगरी यस वडाको बर्नेश्वरमा अर्को स्वास्थ्य इकाइ स्थापना हुँदैछ । भवन केही दिनमा सम्पन्न हुनेछ । यसको लागि आवश्यक कर्मचारी र एकजना अहेब नियुक्तिको लागि भरखरै विज्ञापन भएकोछ । सायद पन्ध्र दिनभित्रमा हामीले यो स्वास्थ्य केन्द्रबाट अहेबसहितको सेवा दिन सक्नेछौं ।
कपिलाकोटमा रहेको आयुर्वेदिक औषधालय पनि अहिले यही वडाको भालुमारामा सारेको छ । त्यहाँबाट सेवा प्रदान गरिरहेको छ । यसले आयुर्वेदिक र एलोपेथिक पनि चलाउने भएकोले हरीहरपुर गाउँपालिकाको को केही भाग र मरिण गाउँपालिकाको ३ र २ नम्बर वडाको बासिन्दाले सेवा पाइरहेको छ । तीनवटा स्वास्थ्य सेवाबाट यो वडाको जनताले सेवा लिन सफल भएको छ ।
(प्रस्तुति : यकिना अगाध)